Yintoni i-Buffalo Hump kunye nendlela yokuyiphelisa | IBezzia
UToñy Torres | 20/07/2021 20:00 | Iingcebiso zezempilo
Ngobudala umzimba utshintsha, ngamanye amaxesha ungenakuguqulwa kwaye ngaphezulu kwako konke, ngaphandle kokuqonda. Olunye lolo tshintsho luhlala luvela kukuvela kohlobo lwe-hump kwindawo yentamo. Igama lakhe lokwenyani yi-kyphosis yomlomo wesibeleko, nangona ikwabizwa ngokuba yiBuffalo Hump.
Ngaba unayo le bump encinci entanyeni yakho kwaye awazi ukuba wenze ntoni ukuyilahla? Siza kukuxelela kwangoko ukuba kutheni iphuma, ungayiphelisa njani kwaye usebenzise imithambo onokuyenza ukuphucula indlela omi ngayo ukusuka ngasemva kwakho. Nangona ingesiso isifo esibi, inokungonwabi xa usenza iintshukumo ezithile.
Ndiyazi ukuba kutheni ikukhathaza kwinqanaba lobuhle, kuba ivelisa Umva ongathandekiyo okanye kuba kuthintela ukuma kwakho ukuba kungachaneki, sikufundisa ukuba ungayilungisa njani le ngxaki. Fumanisa ukuba yintoni i-Buffalo Hump, ungayilungisa njani kwaye kufuneka wenze ntoni ukuthintela ukuba ingaphinde ivele.
1 Yintoni iQhuma lenyathi
2 Uyisusa njani i-Buffalo Hump
Yintoni iQhuma lenyathi
I-Buffalo Hump ibonakaliswa ngokubonakala kwebala okanye indawo egobile kwindawo yentamo. Olu hlobo lwe-hump, Iveliswa ngokufumba kwamafutha, nangona inokubangelwa zizifo Okubi kakhulu, njenge-osteoporosis. Nangona iimeko zezifo ukongeza kwi-hump, ezinye iimpawu ziyavela, ke akufuneki zisoloko zinxulunyaniswa nento enzulu.
Nangona kunjalo, i-Buffalo Hump ingahlulwa ngezi mpawu zilandelayo:
Ukutyeba kakhulu: Njengoko sele ubonile, i-Buffalo Hump ibonakala ngenxa yokufumba kwamafutha, ke abantu abatyebe kakhulu okanye batyebe kakhulu basemngciphekweni omkhulu woku.
Ukusetyenziswa kwezinye iziyobisiUnyango lwexesha elide ngamachiza eglucocorticoid, Oko kukuthi, icortisone.
Ilifa lemvelo: Ewe Umntu othile kusapho lwakho unenyathi, kunokwenzeka ukuba nawe ube nayo.
Ukuma kakubiIsimo esingalunganga somqolo si esinye sezizathu eziphambili ngamafutha aqokelela kula ndawo yentamo. Ukulungisa kunokukunceda ulahle.
Uyisusa njani i-Buffalo Hump
Kukho unyango olwahlukileyo lokususa iBuffalo Hump, kubandakanya ne-liposuction yokususa amanqatha asekhaya. Nangona kunjalo, inyathelo lokuqala ngu fumana unobangela kwaye uqalise ukuphatha i-hump kumthombo wayo. Ukuba imeko yokutyeba kakhulu, into yokuqala kukuqala kukutya okunempilo, ngokuqinisekileyo phantsi kweliso lesondlo.
Kwiimeko apho unobangela usesimweni esibi, iiseshoni zonyango lomzimba zibalulekile. Ukusukela ukongeza ekuncedeni ukulungisa i-Buffalo Hump, iya kukubonelela ngezikhokelo kunye nokuzilolonga ukulungisa ukuma nokuthintela ukuvela kwayo kwixa elizayo. Ngokuphathelele kumatyala apho inento yokwenza nonyango, Kuyimfuneko ukuba uye kwiofisi yengcali ukuze ufumane enye indlela.
Ukongeza kunyango lobuhle, kukho ezithile ukuzilolonga okusebenzayo kakhulu ekupheliseni umvundla wenyathi.
Ukunyusa isifubaLala phantsi emethini kwaye ubeke iingalo zakho emacaleni omzimba wakho kwi-engile yeedigri ezingama-45 iintende zakho zijonge phezulu. Yolula umqolo wakho kangangoko unako, ucofe umqolo wakho phantsi. Ngoku, phakamisa isifuba sakho ngelixa ucofa amagxa akho. Bamba esi sikhundla imizuzwana eli-10 kwaye ubuyele kwindawo yokuqala. Yenza umsebenzi kwiiseti ezimbini zokuphindaphinda ezili-10.
Ukuphakamisa ingaloCinezela umzimba wakho eludongeni, entloko, emagxeni, kwizithende kunye nasesinqeni kakuhle eludongeni. Phakamisa iingalo zakho ngokuzityibilika eludongeni, zide zibe zisezingeni kunye namagxa akho. Ngelixa usenza umthambo, akufuneki uthobe intloko okanye ushukumise amagxa akhoNgale ndlela uya kuthintela ukonzakala. Yenza iiseti ezimbini ze-10 zexesha ngalinye.
Ukwenza le mithambo yonke imihla kuya kukunceda uphucule ukuma kwakho kwaye ngokuthe ngcembe unciphise i-Buffalo Hump. Ukuba ukongeza umthambo ogqityiweyo yonke imihla, njengokuhamba, ukuhamba ngebhayisikile okanye ukuqubha, uya kuncipha emzimbeni ngendlela eqhelekileyo. Igalelo ekunyameni kokufumba kwamafutha kwiindawo ezinjengentamo. Khathalela ukutya kwakho kunye nokuzilolonga rhoqo, umzimba wakho uyakuxabisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Yintoni i-Buffalo Hump kunye nendlela yokuyiphelisa